Orinasa SASM (Sirama): 13 taona aty aoriana vao niverina nihodina indray – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:26
Accueil/Toekarena/Orinasa SASM (Sirama): 13 taona aty aoriana vao niverina nihodina indray
Orinasa SASM (Sirama): 13 taona aty aoriana vao niverina nihodina indray
Notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly, tany Brickaville, ny fiverenan'ny asa sy ny fiodonan’ny orinasa SIRAMA, izay lasa SASM na « Société Agricole Sucrière Malagasy ». 13 taona taty aoriana, niverina niodina indray ity orinasa mpamokatra siramamy ity, rehefa nijanona sy nikatoka nanomboka ny taona 2007.
Yves Samoelijaona 7 septembre 2020
Tany an-toerana nitarika ny lanonana ny Filoha Rajoelina sy ny minisitra maromaro mpikambana ao amin’ny governemanta. « Efa tsapa hatramin’ny ela ny olana teto. Raha nikatona nanomboka ny taona 2007 ity orinasa ity, nisedra olana, nitaraina tamiko ny mpiasa hoe tsy nandray karama izahay Atoa Filoha tamin’izany andro izany. Rehefa tonga tany amiko ny taratasy dia tonga teto amin’ity toerana ity aho. Ataoko ahoana moa ny hijery ny mason’ireo zanantsika mipitrapitra, tsy misy antom-pivelomana intsony ? Tamin’ny 2009 no tonga teto aho nandoa ny karaman’ny mpiasa », hoy ny Filoha Rajoelina raha nandray fitenena, nandritra ity fanokanana ity.
Ny 21 may 2019, tonga tany Brickaville ny Filoha, nitafa tamin’ny mpamboly fary sy nikaroka vahaolana ny hanokafana indray ny orinasa. Nanamfy ny Filoha fa toerana efa ratsy, efa arafesina avokoa ny fitaovana novantanina teo. « Nametraka ny fanamby isika hoe tokony izay rehetra ilain’ny vahoaka Malagasy dia vokarina sy amboarina eto avokoa. Izay no ataontsika, manangana ho tombotsoan’ny be sy ny maro. Ny tanjona dia tsy hanafatra siramamy intsony? Ho ampitomboina ny orinasa tahaka itony. 1.600 no hisitraka ny fisokafan’ity oriasa ity », hoy ihany Filoha Rajoelina.
13 taona tsy niodina ity orinasa ity
« Volana vitsy izay, korotam-by no nisy teto, tsy nisy aina. Ny teny mahalaza azy, dia toa ny taola-maina. Ary maro no efa tsy nino intsony hoe mbola hisy ve ny famokarana siramamy eto. Ianao Andriamatoa Filoha no anisan’ny nino fa tsy maintsy velona indray ny orinasa ary nankahery anay tamin’izany na sarotra sy maro aza ny ady tsy maintsy natrehina satria efa taona maro, 13 taona no tsy niodinan’ity orinasa ity intsony », hoy ny talen’ny orinasa SASM, Franck Fohine raha nandray fitenenana. Nisy ny olana ara-bola tsy maintsy novahana, izay niarahana niasa tamin’ny mpanohana sy ny banky. Teo koa ireo fitaovana mampiodina ireo milina tsy maintsy notadiavina ary ireo akora fototra hanodonana ho siramamy, izay nilana fotoana ihany koa. Niharina tsikelikely ny orinasa SASM ary tonga amin’izao andro hanokanana azy izao.
« Naneho fahaiza-manao ireo mpiasa rehetra ahatomombana ny famokarana satria hain’ny rehetra fa ho reharehan’ny tanan’ny Brickaville ny fisian’ ity orinasa ity. Ary irianay fa ho reharehan’ny firenena ity orinasa ity. Ny tanjona napetrakao Atoa Filoha dia hanana orinasa Malagasy matanjaka afaka manodina ny vokatra eto an-toerana ary hivarotra ihany koa any ivelany. Vina ato anatinay ihany koa izany », hoy ihany ny Tale.
Manodidina ny 300 mpiasa raikitra mampiodina ny orinasa ary 1.200 ny karamaina isan’andro. Mahazo tombony ny rehetra, ny tantsaha sns amin’ny fihodonan’ny orinasa. Hisy fiantraikany amin’ny toekarena amin’ny faritra izany satria hitombo ny fahefa-mividin’ny mponina, hisokatra ireo tsena anatiny izay hitarika ny fanamboarana foto-drafitrasa samihafa izao fihodinan’ny orinasa izao. Marihina fa mamokatra siramamy Bio ny SASM. Tsy mampiasa akora simika na eny an-tsaha na ao amin’ny orinasa. 1.400 taonina ny vokatra andrandraina amin’ity taona ity. Hitombo miandalana izany rehefa miodina tsara ny seham-pamokarana rehetra.
Ny Filoha Rajoelina nitsidika ny orinasa.
Manome hasina ny sehatra tsy miankina, hoy ny Mica
« Manome hasina ny sehatra tsy miankina ny fitondrana. Anisan’izany ny nahatongavana amin’ny andro androany. Anatin’ny velirano faha 7 izany, ny fampiroboroboana ny indositria. Teny faneva an’ity orinasa ity ny hoe fampiroboroboana ny tanàna: Zava-dehibe izany satria ny sehatra tsy miankina dia manampy amin’ny fampandrosoana ny fiarahamonina. Efa nanondrana siramamy isika 25 taona lasa izay. Amin’izao anefa, manafatra 100.000 taonina isan-taona », hoy ny minisitry ny indostria sy ny varotra ary ny asa asa-tanana, Lantosoa RAKOTOMALALA. Misy 800 ny mpamokatra ifotony miara-miasa amin’ny SASM. Ho tohanan’ny tetikasa Fihariana izy ireo hanampiana ny famokarany.
FAHAVITAN’NY ASA FANARENANA: Hahasarika mpizahatany maro ny eny Anatirova
FED ANDIANY FAHA-11: Hampiroboroboana ny fandraharahan’ ireo tantsaha
ANTSOHIHY: Nomena fitaovana ireo vehivavy mpanao asatanana
FAMOKARANA HERINARATRA: Hamboarina ny toho-dranon’Andriampamaky, hamokatra herinaratra 2MW
FANJAKANA MANAKAIKY VAHOAKA: Hapetraka ny birao ifoton’ny harena an-kibon’ny tany (BAM) ao Maintirano